May Nyane: နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်....
You are (9 years). younger than me.
I havealot of time to work, write as much as you can.
I hope so you will.
သေချာတာကတော့ အဲသည် နောင် အနှစ်၂၀ထိ ကျမ.. ခင်ပွန်းသည်နဲ့အတူ ရှိနေခွင့်ရနေသေးရင်… Beatles ရဲ့ When I’m 64 ကို ညည်းဆိုလေး ဆိုရင်း သူ့ကို ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်ဖို့ကိုတော့ မမေ့မလျော့ လုပ်ရပေလိမ့်မယ်..။
I like beatles songs so much.
Let me 1st:
နောင်လာမယ့် အနှစ်ရောက်၇င် မမေငြိမ်း ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေ အလုံးစုံ ဖြစ်မြောက် နိုင်ပါစေ........... ( mie nge )
ဆရာမရေ မမေ့မလျော့ရေးပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်မှာ ဆရာမမေငြိမ်းရဲ့ မြန်မာပြည်တနံ့တလျားခရီးသွားဆောင်းပါးများလည်း ဖတ်ရှုရမယ်လို့မျှော်လင့်မိတယ်။ ကျနော့ခြံဘက်လည်းရောက်ရင်ဝင်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။ တို့ဟူးကြော်ကျွေးပါ့မယ်။
ခရီးရှည်များများသွားဖို့ ဒူးခိုင်ဖို့ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ :P
အမလေး အစ်မရေ..အဲဒီအနှစ်နှစ်ဆယ်ကို ရေးရမှာ မောနေတာ..:(
အစ်မရေးတာကျတော့ ဖတ်လို့ကောင်းလို့.။ ပျော်စရာလေးတွေနဲ့ စိတ်အေးချမ်းတဲ့ နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်..အင်း..နဲနဲတောင် အားရှိသွားပြီ..အဟဲ
နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်မတိုင်ခင်မှာ ဆုံချင်ပါသေးတယ်.. အရင်တုန်းက ဂျီဟောဆောင်ရှေ့ ဖြတ်သွားတိုင်း အချင်းချင်း လက်တို့ရင်း ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ အစ်မကို။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ကိုးနှစ်လောက်က ၀ယ်ပြီးသိမ်းထားဖြစ်တဲ့ ပကတိမြား စာအုပ်လေးမှာ အစ်မရဲ့လက်မှတ်လေးလည်း လိုချင်သေးရဲ့။ :)
ဆရာမရဲ့အရေးအသားလှလှလေးတွေကို လွမ်းနေတာ။
Beatles ရဲ့ When I’m 64 ကို ညည်းဆိုလေး ဆိုရင်း သူ့ကို ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်ဖို့ကိုတော့ မမေ့မလျော့ လုပ်ရပေလိမ့်မယ်..။
အမနော်..း) ပြုံးသွားတယ်.. အမ ပြောတုန်းက တော့..တညိုးလားလို့.. ဟိဟိ..း)
နောင်လာမဲ့ အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျရင် ဆရာလဲ စာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးနိုင်၊ ခရီးတွေ စိတ်ကြိုက် ပျော်ပျော်ပါးပါး ထွက်နိုင်၊ မိသားစု စုံစုံညီညီနဲ့ သိုက်သိုက်ဝိုင်းဝိုင်း နေနိုင်တဲ့ဘ၀ နဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
မေလေးက ဆရာမ စာတွေ တိတ်တိတ် လေးလာ ဖတ်နေတာ ကြာပါပြီ ..တခါမှတော့ ခြေရာ မချန် ဖြစ် ခဲ့ဘူး...ဆရာမ ရေးထားတာ ကြိုက်လွန်းလို့ အခေါက်ခေါက်လာ ဖတ်နေတာ ....
“Beatles ရဲ့ When I’m 64 ကို ညည်းဆိုလေး ဆိုရင်း သူ့ကို ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်ဖို့ကိုတော့ မမေ့မလျော့ လုပ်ရပေလိမ့်မယ်..။”
ဆရာမ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေ အလုံးစုံ ဖြစ်မြောက် နိုင်ပါစေ
နောင်အနှစ် ၂၀ ဆို မေလေးလဲ ကြည်နူးရိပ် မှာရှိနေ လောက်ပြီ...
ဆရာမ ကို လာလည်ဖို့ ခုထဲက ဖိတ်တယ်နော်
Bino... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. Beatles ကို ရင်ခုန်ဖြတ်သန်းခဲ့တာချင်းတော့ သိပ်မကွာ.. Yesterday တို့ Imagine တို့ လည်း ကြိုက်မှာ ထင်ပါ့..။
ရွာသားလေးရေ.. ရေးပေးမယ်လို့ ကတိပေးထားတာကိုးဗျ.. နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်မတိုင်ခင်ရော တို့ဟူးကြော်လာစားလို့ မရဘူးလားအေ့..။ :)
များများအားရှိပါ..။ နောင်မျိုးဆက်တွေထိအောင် ဒီစနစ်ကြီး အသက်မရှည်လောက်ဘူးလို့ ယုံရအောင်လေ..။ ပြီးတော့ မတရားမှုက အဲလောက်အဓွန့်မရှည်လောက်ဘူးလို့လည်း ယုံစို့။
အဲဒီ ဂျီဟောရှေ့က ဖြတ်ဖြတ်သွားရတဲ့ ဘ၀လေးကိုတော့ လွမ်းလည်း လွမ်းတယ်.. ပြန်တွေးရင်လည်း မတွေးချင်ဘူး။ ပကတိမြား ကတော့ တော်တော် အသက်ဝင်တဲ့ ကာရိုက်တာ တွေ ထင်ပါ့..နော်။ ခံစားချက်အကုန်ထည့်ရေးခဲ့တာ။ :)(စကားမစပ်.. ဂျီဟောရှေ့မှာ ကိုငှက်နဲ့ ကျမတို့ သီချင်းလာဆိုတဲ့ ညတွေကို ကြုံလိုက်ရသေးလား ဟင်..)။
မယ်ကိုးရေ..တကယ်တော့ အဲလိုလေးတွေပဲ ရေးချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်တွေမပျော်ရလွန်းတော့.. စိတ်ကူးပေါ်ပေမဲ့ မရေးနိုင်ခဲ့တာ..။ :(
မနော်.. ညီမလေးရယ်.. ဂလိုပဲပေါ့... အဲလိုဖြစ်တတ်တယ်လေ.. ဟုတ်ဘူးလား :P
အမယ်.. ချိုသင်းလည်း တူတူပဲလေ.. အားရှိ ခရီးထွက်နေချင်တဲ့ သူချင်း..အဲဒီအချိန်ကျ.. ချောင်းသာမှာဖြစ်ဖြစ်.. ပုဂံမှာဖြစ်ဖြစ်.. ဆုံချင် ဆုံနေဦးမှာ.. :)
မေလေးရေ.. လာလည်မှာပေါ့..။ ချစ်သူကို သိပ်ချစ်တတ်သူဆိုတာကလည်း တူလေတော့..။ ဟဲဟဲ.. ကျမကတော့ ချစ်လည်း ချစ်တတ် စိတ်လည်းတိုတတ်.. :D လာလာလည်တာ ကျေးဇူးပါနော်..။
ဒီ post title လေး မြင်တာနဲ့ When I am 64 သီချင်းလေး ပြေးသတိရမိတာတော့ တူနေပြီ မမရေ။
ဆရာမ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ အားလုံး ပြည့်ပြည့်ဝဝ အကောင်အထည်ပေါ်လာနိုင်ပါစေလို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်...။ နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်လေးလဲ အေးချမ်းသွားလောက်ပြီလို့ ဆရာမနဲ့ ထပ်တူ မျှော်လင့်မိပါတယ်...။ အဲဒီအခါမှာ ဆရာမတို့တွေ အားလုံးနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆုံချင်ပါသေးတယ်...။
"အချစ်အကြောင်းပြောရအောင်" နဲ့ "အိပ်မက်တခုနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်" စာအုပ်လေးတွေမှာ ဆရာမရဲ့ လက်မှတ်လေးတွေ ထိုးပေးပေါ့နော်...။
နောင်လာမယ့် အနှစ် ၂၀ တွင် ကျွန်တော်၏ သတင်းစာ ထုတ်ဝေသော လုပ်ငန်းတွင် ဒေါ်မေငြိမ်းသည် အကြံပေးလုပ်ပေးမည်ဟု ကတိပေးပြီးကာမှ ခရီးများလှိမ့်ထွက်နေသောကြောင့် ပြသနာရှာရပေလိမ့်မည်။ :P
ခရီးသွားမယ်ဆိုတာချည်းပဲ မနားဘူး ဟွန်း
လုပ်ပါ ကိုယ့်အမကြီး စိတ်ချမ်းသာတာပဲ မြင်ချင်ပါတယ်။ သိပ်မကြာတော့ပါဘူး သတင်းစာလဲ နောက် ၅ နှစ်ဆို ထုတ်တော့မှာ နောက်အနှစ် ၂၀ စောင့်စရာ မလိုတော့ဘူး။ :P
၆၄နှစ်မှာ လှနေဦးမယ့် ဆရာမကို မြင်ယောင်မိတယ်။
နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်မတိုင်ခင်၊ အနှစ်နှစ်ဆယ်တိုင်၊ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် သည် အထိ...
ဆရာမ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ အားလုံး ပြည့်ပြည့်ဝဝ အကောင်အထည် ပေါ်လာနိုင်ပါစေလို့ ...။
ထာဝရ ပျော်ရွှင် ငြိမ်းချမ်းနီုင်ပါစေ ဆန္ဒပြုလျက်
Rita ရေ.. ဟုတ်တယ်.. ဒီစာလေးရေးနေတုန်းပဲ ရီတာ့ဆီ post တက်တော့ ပြေးဖတ်လိုက်သေးတာ.. သီချင်းတောင် Rita ဆီကပဲ ကူးယူလိုက်တာ။ အဲ့ဒီ သီချင်း နားထောင်တိုင်း စိတ်ထဲ တမျိုးလေး ဖြစ်နေကျ လေ..။
သက်ဝေရေ.. ဆုံရမှာ အသေအချာ..။ အန်တီစုသာ အပြင်ရောက်လာပြီး တိုင်းပြည် ထူထောင်ရေး လုပ်ပြီဆိုရင် ကိုယ်နိုင်တာကို ၀င်ကူဖို့ အပြေးကို ပြန်မှာ။ အဲ့ဒီအခါကျ အတူတူ လုပ်ကြ စို့လေ..နော..။
ဖိုးသုည.. ရှုပ်ရှုပ် ရှုပ်ရှုပ် မလုပ်နဲ့။ ဒီမိုကရေစီ ရရင် တို့က သတင်းမလုပ်တော့..။ အချစ်ဝတ္ထုတွေပဲ ရေးမှာလို့ ပြောပြီးသားး။
မီယာ.. အဲဒီအချိန်ထိမစောင့်ပဲ မုန့်ကျွေးချင်လာပြီ။ :)
မိုးကုတ်သားရေ.. ဆုတောင်းလည်းပြည့်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ အမတခေါက်မှ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ မိုးကုတ်ကိုလည်း လာလည်ချင်တယ်..။ ဖိတ်ဦးလေ..နော..။
မ ရေ… မ ရဲ့နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်က လှလိုက်တာနော်… မ ရေးထားတာထက် ပိုလို့ ပိုလို့ လှပါစေလို့ … အဲဒီအခါကျရင် မ နဲ့ ခရီးတူတူထွက်ချင်လိုက်တာ… ပြီးတော့ အသက် ၆၄ ထိ စိတ်ကူးချိုချိုလေးတွေနဲ့နုနယ်ပျိုမျစ်နေတဲ့ မ စာတွေလဲ ဖတ်ချင်သေးတယ်… အခွင့်သာရင်တော့ မ ဆီလာလည်ပြီး အချစ်အကြောင်းတွေ ပြောချင်သေးတယ်… မ ရေ… မမသီဂီင်္ကိုပြန်တဲ့ ကော်မန့် ထဲမှာ တွေ့ လိုက်ရလို့ … ကိုငှက်ကြီးအဆောင်မှာ သီချင်းဆိုတဲ့ညကို ကျွန်မတို့ မှီလိုက်တယ်… ဒါပေမယ့် ဂျီဟောသူမဟုတ်တော့ နောက်တနေ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်ပြောပြတာကို သွားရည်လေးကျ နားထောင်ရတာပါ…
Hi may Nyane,
Your story is very much irony. Your story tells that you wish to return back to Myanmar when you will be retired and live in Myanmar in tranquility, peach and rich of cause.
What you have done for your country until now May Nyane?
What you have accomplished for your country May Nyane?
You left your country in the pre-text of you could not write what you wished, but all of your Romans were love-story not educative nor social –society-oriented as the popular word given by the so call exiles.
You profited the unstable political situation in order to get your entry visa later legal-stay in the US. You did absolutely nothing for your country May Nyane.
Now you tell us that when Myanmar will be stable, you wish to come back to Myanmar in order to profit again the improved and stable situation of Myanmar!!! How so egoist you are!!
I will not ask to do something for your country, as your country happens to my beloved country, I would like to suggest you that enough is enough. Now you have all what you wish, legal stay in the US and successful life in the US. Therefore please do not disturb any more our country.
Please do not paint any more our country with bad color in front of the foreigners, on the opposition media. You profited enough our country, now you should be satisfied.
Please do not sell any more our country simple because you continue to get some personal profits.
Please think of our people suffering in Myanmar.
အနှစ်နှစ်ဆယ်မတိုင်ခင် လာစားလို့လည်း ရပါတယ်ခင်ဗျ။ အခုအိမ်မှာတော့ တောင်ကြီးက တို့ဟူးခြောက်ကြော်တွေပဲရှိတယ်။ ဒီရုံးပိတ်ရက် အခါးရည်နဲ့မြည်းမယ်လေ ဆရာမ လာခဲ့ပါခင်ဗျ
နှစ်တွေထဲ မနစ်ဖို့ လိုက်ဆယ်ခဲ့ရတဲ့ အနျစ်နှဆယ်
နှစ်တွေထဲ နှစ်တွေကို လိုက်ဆယ်ရဦးတော့မယ် နောက် အနှစ်နှစ်ဆယ်
နောင်လာမယ့် အနှစ်ရောက်၇င် ဆရာမ မေငြိမ်း ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေ အလုံးစုံ ဖြစ်မြောက် နိုင်ပါစေ ဆရာမ
ဆရာမ ချစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ.. ဆန္ဒတွေ အားလုံး ပြည့်ဝပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
လွန်လွန်းဘူးလား.. တစ်နှစ်တည်းကို အကုန်လည်ပြစ်မှာလား .. မြန်မာပြည်ဟာ လှနေမှာပါ. အမြဲတမ်းလည်း ကျွန်တော်တို့ အတွက် ရှိနေဦးမှာပါ၊ တစ်နေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ အမိမြေပြန်ခွင့်ရကြမှာပါ